Cabasho Isgaarsiin ka go’an 6 maalmood Cal Bari-Baargaal,Caluula,Qandala & Ufeyn | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Baargaal, PUNTLAND, WARARKA	> Cabasho Isgaarsiin ka go’an 6 maalmood Cal Bari-Baargaal,Caluula,Qandala & Ufeyn
Friday, October 29, 2010 Laaska News
Wararka naga soo gaaraya magaalada Caasimadda Ganacsiga ah ee Boosaaso, iyo Qurbo joog ayaa sheegaya in Degmooyin Bariga ah oo ay kamid yihiin Baargaal,Qandala(Baliga),Caluula ,ufeyn iyo meelo kale ay ka goan yihiin isgaarsiinta telefoonada muddo 6 maalmood ah.
Cabashada mid lamid ah waxaa nasoo gaarsiiyay ganacsato iyo Qurbo joog ka soo jeeda deegaanada,iyagoo sheegaya inaanay garanayn sababta keentay go’itaanka isgaarsiinta.
Ganacsade la soo xiriiray laaska News ayaa sheegay in Boqolool doonyood ama Laash oo kaluumaysi ah oo deegaanada Bariga ka kaluumaysta inaan war laga hayn,wuxuuna sheegay inay ka qabaan welwel aad u weyn waxaa keenay go’doonka lagu sameeyay iyo sababta ka danbeysa in la jaro.
Laaska News waxay weydiisay rag ku sugan Boosaaso oo deegaanka kasoo jeeda inay la xiriireen shirkadaha Telefaanada?
Waxay jawaab ku bixiyeen in shirkadda Golis ay sheegtay Waxay u xiran tahay Isgaarsiintu Dawladda Puntland.
Qurba Joogta ayaa iyana dhinacooda la jaah wareersan sidii ay ula xiriiri la haayeen eheladooda.
Haddaba waxaa odayaasha ,Qurba joogta iyo Ganacsatada cabashada nasoo gaarsiiyay ka codsanayaan Maamulka Puntland in si degdeg ah wax looga qabto,kana bixiyaan tafaasiir arrintan,sababtoo ah waxay nagu haysaa ayay yidhaahdeen dhib weyn,Khasaare maadi ah iyo Go’doomin.
Deegaanada bari ayaa ah meelaha halbawlaha u ah dhaqaalaha Puntland(kaluumaysiga iyo xijiga) , Saamayn weyna ku leh dhaqaalaha dalka oo dhan,loona baahan yahay Dawladda Puntland inay wax ka qabato Baahidaa umadda iyo cabashada.
Laaska News wararkan waxaa soo gaarsiiyay Odayaal iyo Ganacsato ku kala sugan Boosaaso iyo carabaha iyo Qurbo joog adduunyadaa kala jooga oo ka soo jeeda Bariga.
Wixii dheeraad ah ee ka soo kordha Kala soco Laaska News..
Maslax Siyaad oo Xisbi Siyaasi ah Ku dhawaaqay Buulo Xaawo oo la wareegeen Islaamiyiintu